Fanentanana hanohitra fampijaliana. Mafana fo amin'ny fampijaliana
23. Febroary 2019 Oliver Bienkowski
Miangavy an'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny orinasam-baovao voakasik'izany izahay mba hanao pirinty ny valin-teninay sy ny fahamarinana. Ny toeran'ny PixelHELPER any Maraoka dia ny hamorona fomba fifaneraserana fanampiana fanampiana maha-olona & fanaraha-maso ireo tetikasa zavakanto - eto an-tranonay - miaraka amin'ny rindrambaiko mivantana mivantana sy ampiasao andavanandro natolotray tao amin'ny TED Talk any Marrakech. Ho fanampin'ny toeram-piompiana algala, trano famafa-mofo ary manjaitra ny asa maha-olombelona sy ny fananganana zavakanto miaraka amin'ny kopian'ny sisintany eoropeana, fampahatsiahivana ireo olom-bitsy nenjehin'ireo antokom-pivavahana rehetra dia nanangana famerenan'ny tilikambon'i Orthanc ihany koa. #HerrderRinge. Ireo hetsika rehetra ireo dia natao tamim-pahanginana tamin'ny mivantana mivantana teo anelanelan'ny Septambra 2018 sy Aogositra 2019. Tafiditra ao amin'ny akanjo an'ny Lord of the Rings Cosplay na Concentration Camp akanjo. Tamin'ny volana septambra dia nametraka ny 2018 ny fangatahana fankatoavana ny zaridainantsika miaraka amin'ny fametrahana zavakanto izay mbola tsy nasiana fanovana satria tsy noraharahian'ny ben'ny tanàna izahay taona 1. Rehefa fantatray fa tsy misy fifampiresahana, nanomboka nametraka ny tetikay izahay. Ny gazety dia mitaky zavatra tsy mety, toy ny: Rano tsimoka: Tsy afaka mangalatra rano amin'ny lavaka fantsakana ianao ary tsy mifandray amin'ny tambajotra rano ao an-toerana. Mifanohitra amin'izany kosa, raha tapaka ny tilikambo rano teo an-toerana ho an'ny tanàna iray, ny pokalantsika any ivelany dia andro maromaro teo am-panompoana ny mponina. Stromklau: Nahazo faktiora herinaratra avo izahay avy amin'ny 200-300 € isam-bolana, tsy nahazo herinaratra nangalatra mihitsy. Ny famatsiam-bola PixelHELPER tato anatin'ny taona vitsivitsy dia namatsy vola 15% isan-taona amin'ny alalàn'ny fanomezana sy 85% amin'ny alàlan'ny hetsika izay nomen'ny PixelHELPER fangatahana maivana amin'ny fikambanana hafa. Midika izany fa na dia mangataka fanomezana any amin'ny birao tsirairay aza isika, ny loharanom-bola lehibe indrindra dia ny famatsiam-bola maivana ho an'ny antoko fahatelo. PixelHELPER dia mbola tsy namariparitra an'i Maraoka ho feno fankahalana ny Jiosy fa te hamorona ny Fahatsiarovana amin'ny Jiosy novonoina, Sinti & Roma, Uyghurs ... ho toerana ho an'ny daholobe hanangona ny fampahalalana momba ny kolontsaina sy ara-tantara. Ny mpanorina PixelHELPER dia aseho ao amin'ny haino aman-jery Maraokana ho toy miray, saingy tena nifankatia tamina vehivavy breziliana tsara tarehy nandritra ny taona maro. Mbola tsy nampiasa ankizy izahay, fa ny ankizy mahantra eo amin'ny manodidina no manome akanjo malalaka, vola, bisikileta, satroka, ary trinkets hafa, ary manana tanjona izahay ho an'ny sehatry ny baolina kitra. Ny fiampangana tiantsika hanangana Isiraely faharoa any Maraoka, dia tsy misy ny fototry ny zava-misy. Ny fisalasalàn'ny Maraokana noho ny Freemasonry dia tsy miorina fa naorina tao Tangier ny Lodge 1867 voalohany. Misy aza ny trano fandraisam-bahiny madio any Maraoka. Ny tenanay dia mbola tsy nihaona tamin'ny Magro Magdalena na nandray anjara tamin'ny trano fiasana. Diso fanantenana ny tompon'andraikitra ao amin'ny Maraokana izay nahita isan'andro tamin'ny alàlan'ny mivantana izay ataontsika eto. Nohazavainay matetika ihany koa ny tetika sy apetrakay ao amin'ny foiben'ny mivantana mivantana PixelHELPER. Ny hoe ny vahiny rehetra dia tsy mahatakatra ny fihetsik'ireo rehetra ireo, tsy mahalala ny zavakanto, tsy mahalala ny fanampian'ny mivantana mivantana amin'ny alàlan'ny fampahalalam-baovao sosialy ary matahotra ny freemasonry fa tsy fahadisoan'ny PixelHELPER fa mifototra amin'ny fianarany manokana amin'ny lohahevitra. Afaka mahazo vaovao ny rehetra. Raha ny hitanay mivantana ao amin'ny Internet isan'andro, dia asan'ny governemanta Maraokana ny miresaka amintsika hatolotray foana. Tsy nisy namaly ny fifandraisana rehetra. PixelHELPER nanoratra indroa ireo mpikambana rehetra ao amin'ny parlemantokana Maraokana amin'ny e-mail. Ny mpikambana rehetra ao amin'ny CORCAS dia nahazo mailaka maro. Ny masoivoho Maraokana rehetra eto amin'izao tontolo izao dia nahazo vaovao tsy tapaka taminay. Nisy mpiasa iray tao amin'ny masoivoho Maraokana tany Soeda nampahalalana tsy tapaka momba ilay tetikasa. Ny gazety dia mitaraina momba ny sary kosplay izay ampiasain'ny mpiasan'ny akanjo vita amin'ny peratra #herring. Ny rosiana Merkel izay noforonina tànana dia navoakanay ho toy ny sary cosplay mampihomehy ary tsy manana fiaviana Masonika. Tamin'ny fandravana dia lasa nidina ho an'ny maty ny hohaninay #TombiaBraide nopotehina, ny fakan-tsarin'ny 15 metatra misy anay & - niniana natao tamin'ny herinaratra an'arivony an'arivony herinaratra & tariby tambajotra. Ireo fanambarana rehetra ireo dia voamarina. Tsy misy an'i PixelHELPER fa misy ao anatin'ny lavaka fifandraisana ataon'ny manampahefana Maraokana. Talohan'ny nanombohan'ilay tetik'asa tany Maroc tamin'ny taona 2014, dia nampahafantatra manokana ny masoivoho Maraokana any Berlin i Oliver Bienkowski momba ny tetik'asa rehetra nokasaina.
Tagged: Android App, fanangonam-bola, fanampiana mahaolona, LiveStream